Cycloastragenol (CAG) Nkeji makwaara dị ka T-65 bụ ihe tetracyclic triterpenoid sitere na Astragalus membranaceus osisi. Ebu ụzọ chọpụta ya mgbe Astragalus membranaceus wepụ a na-enyocha ya maka ihe ndị na-arụ ọrụ na-egbochi ịka nká.
Cycloastragenol nwekwara ike isite na Astragaloside IV site na arụ ọrụ hydrolysis. Astragaloside IV bụ isi ihe na-arụ ọrụ n'ime Astragalus membranaceus ogwu. Ọ bụ ezie na Cycloastragenol na Astragaloside IV yiri nke ahụ na usoro ha, cycloastragenol dị nfe na molekụl karịa Astragaloside IV. N'ihi ya, Cycloastragenol na-arụ ọrụ nke ọma n'ihi nnukwu bioavailability ma si otú a dị elu metabolism nke cycloastragenol. A na-ahụ nnukwu metabolism nke cycloastragenol na epithelial nsia site na mgbasa ozi.
Ejirila ahịhịa astragalus dị ka ọgwụgwọ ọdịnala ndị China ruo ọtụtụ narị afọ ma jikwa ya taa. Ejirila osisi Astragalus n'ihi mmetụta ọ bara uru gụnyere mgbochi nje, mgbochi mkpali yana ike ịkwalite ọgụ.
E gosipụtara CAG dị ka ihe na-egbochi ịka nká nke na-akwalite ọrụ nke enzyme telomerase na ọnya ọnya. Ọ bụ ugbu a bụ isi ihe eji mara telomerase na ụmụ mmadụ, si otú a bụrụ atụmanya atụmanya dị ukwuu maka mmepe n'ihu.
Achọpụtara Cycloastragenol dị ka telomerase activator, nke na-arụ ọrụ nke ịbawanye ogologo nke telomeres. Telomeres bụ okpu nchebe nke mejupụtara ntughari nucleotide na njedebe nke chromosome. Telomere ndị a na - adị mkpụmkpụ karịa nkewa mkpụrụ ndụ ọ bụla nke na - ebute sel na ịda mba. Ọzọkwa, nrụgide oxidative nwekwara ike belata telomeres.
Mbelata a dị mkpụmkpụ nke telomere jikọtara ịka nká, ọnwụ na ụfọdụ nsogbu metụtara ag. N'ụzọ dị mma, enzyme telomerase nwere ike ịbawanye ogologo nke telomeres ndị a.
Agbanyeghi na enweghi otutu omumu iji gosiputa ike nke cycloastragenol iji gbasaa ogologo ndụ, ọ bụ ihe na-ekwe nkwa ịka nká. Egosiputala iji kpochapụ ihe ịrịba ama nke ịka nká gụnyere usoro ndị dị mma na ahịhịa. CAG nwekwara ike belata ihe egwu nke ịrịa ọrịa na-adịghị ala ala dị ka Parkinson, Alzheimer's, na cataracts.
N'agbanyeghị na ọtụtụ cycloastragenol uru ahụike, enwere nchegbu na ọ nwere ike ibute kansa ma ọ bụ mee ka kansa dị ngwa. Otú ọ dị, nnyocha ụfọdụ e mere na isiokwu ụmụ anụmanụ na-akọ uru nke cycloastragenol na-enweghị nsogbu ọ bụla nke kansa.
Cycloastragenol ntụ ntụ maka ire ere dị ngwa ngwa n'ịntanetị ma nwee ike zụta n'aka ọtụtụ ndị na-ebubata cycloastragenol a ma ama.
N'agbanyeghị, ọtụtụ uru ahụ ike cycloastragenol gosipụtara, ọ ka bụ onye ọhụụ n'okpuru ọmụmụ ihe. Ọzọkwa, mmetụta dị na cycloastragenol abụghị nke doro anya, ya mere a ga-eji nlezianya mee ihe.
Kedu ihe bụ Cycloastragenol?
Cycloastragenol bụ triterpenoid saponin nke sitere na mgbọrọgwụ nke ahịhịa Astragalus. Astragalus membranaceus ejirila osisi mee ihe na ọgwụ ndị ọdịnala China (TCM) kemgbe ihe karịrị afọ 2000 wee ka na-eji ya maka ahịhịa ọgwụ.
A maara ahịhịa astragalus maka ikike iji melite ọgụ, chebe ndị dị ndụ, rụọ ọrụ dị ka diuretic yana inwe ahụike ọzọ Njirimara dika mgbochi hypersensitivity, antibacterial, Mgbochi nká na uru nrụgide.
Cycloastragenol a na-akpọkarị TA-65 mana akpọkwara ya Cyclogalagenin, Cyclogalegenin, Cyclogalegigenin, na Astramembrangenin. Cycloastragenol mgbakwunye a maara nke ọma dị ka onye na-egbochi ịka nká, Otú ọ dị, uru ahụike cycloastragenol ndị ọzọ na-agụnye ime ka usoro ahụ ji alụso ọrịa ọgụ, ihe mgbochi mkpali na mgbochi oxidative.
Cycloastragenol na Astragaloside nke Anọ
Ma cycloastragenol na Astragaloside nke IV na-eme n'ụzọ nkịtị na osisi astragalus. Astragaloside IV bụ isi ihe na-arụ ọrụ n'ime astragalus membranaceusOtú ọ dị, etịbe na nkeji obere na mgbọrọgwụ. Usoro nke ịmịpụta saponins ndị a, cycloastragenol na astragaloside IV, na-esikarị ike n'ihi ọkwa dị elu dị mkpa.
Mgbe ha abụọ cycloastragenol na astragaloside IV sitere na ogwu astragalus, cycloastragenol nwekwara ike inweta site na astragaloside IV site na usoro hydrolysis.
Ogige abụọ a nwere ụdị kemịkal yiri nke ahụ, agbanyeghị, cycloastragenol dị nfe karịa ịdị arọ karịa astragaloside IV ma nwekwaa ike ịnweta.
Usoro nke Action nke Cycloastragenol
i. Ebugharị Telomerase
Telomeres bụ nucleotide na-ekwughachi na nsọtụ nke chromosomes linear ma jikọta ya na ụfọdụ protein. Telomeres dị mkpụmkpụ na mkpụmkpụ nke mkpụrụ ndụ ọ bụla. Telomerase, ihe odide ribonucleoprotein nke mejupụtara enzymes transcriptase na-agbanwe agbanwe (TERT) na teknụzụ RNA akụrụngwa (TERC) na-agbatị telomeres. Ebe ọ bụ na ọrụ dị mkpa nke telomeres bụ ichebe chromosomes site na njikọta na mbibi, mkpụrụ ndụ na-amatakarị obere telomere dị ka DNA mebiri emebi.
Cycloastragenol telomerase arụ ọrụ na-arụ ọrụ na ogologo nke telomeres nke na-egosipụta mmetụta bara uru.
ii. Emezi ka lipid metabolism
Lipids na-eme ihe dịka ụlọ ahịa maka ume na ahụ anyị. Otú ọ dị, ihe dị ukwuu n’ọbara ndị a pụrụ ịbụ ihe na-emebi ahụ ike anyị.
Cycloastragenol na-akwalite metabolism dị mma site na ọtụtụ bioid metabolism biomarkers.
Nke mbụ, na obere doses, CAG na-ebelata ụmụ irighiri mmiri liptoplasmic na 3T3-L1 adipocytes. Nke abuo, mgbe ejiri ya na nnukwu doses, CAG na-egbochi ọdịiche nke 3T3-L1 preadipocytes. N'ikpeazụ, CAG nwere ike ịkpalite nsị calcium na 3T3-L1 preadipocytes.
Ebe ọ bụ na calcium dị elu intracellular nwere ike igbochi ọdịiche adipocytes, CAG na-eweta nguzozi na lipid metabolism site na-akpali akpali ịba ụba calcium.
iii. Antioxidant ọrụ
Nchegbu Oxidative bụ isi ihe kpatara ọtụtụ ọrịa na ụbụrụ cell. Nchegbu Oxidative na-apụta mgbe enwere oke radicals na ahụ.
Cycloastragenol na-egosiputa ihe na-egbochi oxidative site na ime ka ikike antioxidant dịkwuo elu. Ọrụ antioxidant a metụtara otu hydroxyl dị na CAG.
Ọzọkwa, nrụgide oxidative bụ isi ihe na-eme ka telomere dị mkpụmkpụ, ya mere, CAG na-enweta nchedo telomere site na ọrụ antioxidant na telomerase activation.
iv. Ọrụ mgbochi mkpali
Ọ bụ ezie na mbufụt bụ ihe okike nke ahụ na-alụ ọgụ megide ọrịa ma ọ bụ mmerụ ahụ, mbufụt na-adịghị ala ala na-emerụ ahụ. A na-ejikọta mbufụt na-adịghị ala ala na ọtụtụ nsogbu dịka oyi baa, ọrịa shuga, ọrịa obi na ọrịa ogbu na nkwonkwo.
Cycloastragenol ntụ ntụ na-egosipụta ihe mgbochi mkpali. Uru mgbochi mkpali nke cycloastragenol sitere n'ụzọ dịgasị iche iche gụnyere igbochi mmụba lymphocytes na imeziwanye protein protein kinase (AMPK) phosphorylation.
Uru nke Cycloastragenol
i.Cycloastragenol na usoro mgbochi
Cycloastragenol nwere ike inye aka melite ọgụ site na ịba ụba nke T lymphocyte. Ikike nke cycloastragenol iji mee ka telomerase rụọ ọrụ na-enyere ya aka ịkwalite mmezi DNA ka ọ na-ebute uto na ogologo nke telomere.
ii.Cycloastragenol na mgbochi ịka nká
Cycloastragenol mgbochi ịka nká Njirimara bụ isi ihe kachasị nyocha n'ọtụtụ taa. E gosipụtara CAG iji mee ka ụmụ mmadụ kwụsị ịka nká na ibelata ihe ịrịba ama nke ịka nká dị ka ahịhịa na ahịrị dị mma. A na-arụ ọrụ cycloastragenol na-egbochi ịka nká site na usoro anọ dị iche iche. Usoro cycloastragenol na-egbochi ịka nká gụnyere;
Na-alụ ọgụ nchegbu
Nsogbu na-akpata Oxidative na-eme n'ụzọ nkịtị mgbe enweghi nsogbu n'etiti free radicals na antioxidant n'ime ahụ. Ọ bụrụ na ejighị ya achịkwa, nrụgide oxidative nwere ike ime ka usoro ịka nká mee ngwangwa yana duga n'ọnọdụ na-adịghị ala ala dịka ọrịa kansa, ọrịa obi na ọrịa shuga.
Wepụ Cycloastragenol astragalus bụ ezigbo antioxidant onyinye na-emekwa ka ikike nke antioxidants dị adị. Nke a na - enyere aka ịka nká oge ma gbochie omume nke nsogbu afọ.
Cycloastragenol na-arụ ọrụ dị ka telomerase activator
Dị ka a tụlere na ngalaba dị n'elu banyere usoro ọrụ, cycloastragenol na-enyere aka ịgbatị telomeres. Nke a na-arụ ọrụ dị oke mkpa n'ịhụ na usoro nke cell na-aga n'ihu na-egbu oge ịka nká. Nke a na - enye aka ịdebe ahụ mmadụ na - arụ ọrụ nke ọma.
Cycloastragenol na-enye nchebe site na ụzarị ọkụ UV
Mgbe mmadụ na-enwu n’anyanwụ ruo ogologo oge, mkpụrụ ndụ mmadụ nwere ike imebi emebi ma ghara ịrụ ọrụ nke ọma. Nke a pụtaara n'ụdị nká akaghi aka nke akpọtụrụ dị ka ịka nká.
Cycloastragenol ntụ ntụ na-abịa napụta ka e gosipụtara iji chebe akpụkpọ ahụ pụọ na mmetụta ọjọọ nke ụzarị UV.
Cycloastragenol na-egbochi glycation protein
Glycation bụ usoro nke shuga dị ka glucose ma ọ bụ fructose tinye na lipid ma ọ bụ protein. Glycation bụ otu n'ime ndị na-ahụ maka ọgwụ shuga ma jikọtara ya na nká yana nsogbu ndị ọzọ.
Mgbakwunye Cycloastragenol na-enyere aka igbochi ịka nká n'ihi glycation site na igbochi nhazi nke ngwaahịa glycation.
iii.Ndị ọzọ nwere ike ịba uru na Cycloastragenol:
Cycloastragenol cancer ọgwụgwọ
A na-egosipụta ikike ịgwọ ọrịa kansa nke cycloastragenol site n'ike ya ibibi mkpụrụ ndụ kansa, melite ọgụ yana chebe mmadụ pụọ na mmeghachi omume na-emerụ ahụ nke chemotherapy.
N'ime nyocha nke ndị nwere ọrịa ara ure, ọrịa kansa cycloastragenol E gosipụtara ọgwụgwọ site n'ike ya iji belata ọnwụ site n'ihe dịka 40%.
Nwere ike ichebe obi megide mmebi
Cycloastragenol nwere ike inye nchebe pụọ na nrụrụ obi.
N'ime nnyocha nke oke nwere obi mgbawa, enwetara cycloastragenol supplementation iji meziwanye nsogbu obi site na ịkwalite autophagy na sel myocardial yana igbochi ngosipụta nke matriks metalloproteinase-2 (MMP-2) na MMP-9.
Dabere na nyocha nke cycloastragenol, ọ nwere ike melite ogo ụra. Otú ọ dị, a ga-achọ ọmụmụ ihe gbasara ahụike iji nye ihe akaebe gbara ọkpụrụkpụ na ikike ya ịkwalite ụra.
Nwere ike nyere aka ịlụ ọgụ ịda mba
Achọtala telomere dị mkpụmkpụ na ndị mmadụ na-arịa nsogbu ịda mba dị ka nsogbu ọnọdụ uche na ọrịa dịka Alzheimer.
N'ime nnyocha nke ụmụ oke na ule a na-agba mmiri, a chọpụtara na mgbakwunye cycloastragenol nke enyere maka ụbọchị 7 iji belata mmebi ha. E gosipụtara iji rụọ ọrụ telomerase na akwara ozi yana sel PC1, nke na-akọwa ikike mgbochi nkụda mmụọ ya.
Nwere ike mee ka ọnya ọnya dị ọsọsọ
Ọrịa ọnya bụ isi okwu na ndị ọrịa mamịrị. Usoro a nke ọgwụgwọ ọnya na-eme site na usoro ọrụ. Ihe omume ndị a bụ; arụ ọrụ mkpali, ịkpụkọ, iweghachi nke epithelium, iwughachi na n'ikpeazụ iwu nke mkpụrụ ndụ mkpụrụ ndụ. Mkpụrụ ndụ mkpụrụ ndụ epithelial a dị oke mkpa n'ịgwọ ọnya nke ọrịa mamịrị.
Egosiputara na mbibi nke telomere na-emetụta ọnya ọnya n'ụzọ na-adịghị mma. Nke a ebe cycloastragenol ntụ ntụ na-abịa iji dozie telomere dị mkpụmkpụ yana ịkwalite mmụba na mmeghari nke sel mkpụrụ ndụ. Nke a na-enyere aka na mmezi ọnya ngwa ngwa.
Nyocha nke Cycloastragenol nke ndị ọrụ onwe ya na-egosi na cycloastragenol nwere ike inye aka igbochi ntutu isi, kwalite uto ntutu ma bulie agba ntutu.
More cycloastragenol astragalus wepụ uru bụ;
Enyele mgbochi nje ọrụ megide mmadụ CD4 + mkpụrụ ndụ.
Mma ahụ ike.
Nwere ike melite ọhụụ.
Standardkpụrụ Ọdịdị nke Cycloastragenol
Ụkpụrụ usoro onunu ogwu nke cycloastragenol dị ihe dị ka 10 mg kwa ụbọchị. Otú ọ dị, ebe ọ bụ na nke a pụtara ọhụrụ mgbakwunye usoro onunu ya ga adabere na ojiji, afo na onodu ogwu.
Standardkpụrụ usoro cycloastragenol nke a kwesịrị ịbawanye na ndị agadi nke ihe karịrị afọ 60 iji mezuo ogologo telomere yana belata usoro ịka nká.
Cycloastragenol ọ dị mma?
A na-ahụkarị ntụ ntụ nke Cycloastragenol dị ka ihe nchebe na usoro ụfọdụ. Otú ọ dị, ebe ọ bụ na ọ dị ọhụrụ mgbakwunye ihe omume cycloastragenol ga-ekwe omume amabeghị.
Nyocha ole na ole cycloastragenol banyere uru ndị dị na cycloastragenol ezughi oke iji mee ka ọ jiri ya mee ihe.
Tụkwasị na nke a, enwere nchegbu na mgbakwunye cycloastragenol nwere ike mee ka kansa dị ngwa site n'ịkwalite uto etuto ahụ. Nke a bụ akụkọ ịkọ nkọ na-adabere n'eziokwu na ụdị usoro cycloastragenol bụ site na telomere elongation. A na - eche ya na ọ ga - eme ka uto cell cancer.
Ya mere, ọ bụ ihe amamihe dị na ya izere ịnye ndị ọrịa cancer cycloastragenol ruo mgbe data a pụrụ ịdabere na ya dị na nkọwa a na kwa izere nsị cycloastragenol ọ bụla na-amaghị.
Ebee ka anyị nwere ike ịnweta Cycloastragenol kacha mma?
Ọfọn, cycloastragenol ntụ ntụ maka ọrịre dị na ntanetị yana n'ọtụtụ ụlọ ahịa na-edozi ahụ. Otú ọ dị, na-enyocha mgbe nile maka cycloastragenol ntụ ntụ maka ire ere site na ndị na-eweta cycloastragenol a kwadoro na ndị a ma ama iji hụ na ị dị ọcha nke cycloastragenol.
Egosiputara Cycloastragenol ntụ ntụ iji nweta ọtụtụ mmetụta bara uru yana ihe ndị ọzọ na-eme ka ịka nká na cycloastragenol. Cycloastragenol telomerase ebighị bụ isi ihe omume nke na - emewanye telomere. Egosiputara ha ni otutu umu anumanu na otutu kpọọ ọmụmụ.
Ọnwụnwa ahụike nke cycloastragenol astragalus wepụ mmetụta na ịgbatị telomere dị ole na ole ma si otú a na-achọkwu ọmụmụ ihe iji nye ihe akaebe siri ike.
Mmetụta utịp nke TA-65 na-eme ka ọrịa na-arịa ọrịa obi dị obere nke ukwuu ka ọmụmụ pere mpe dị na nkwado nke ọrụ TA-65 a.
Mụ metabolism nke cycloastragenol na nkọwa ga-akawanye na data dịnụ ma kpughee nsị ọ bụla nke cycloastragenol nke nwere ike ime n'ihi oke ụba.
Nnyocha ndị ọzọ iji nyochaa nrụpụta ọrụ nke cycloastragenol mgbakwunye na uru ndị a kapịrị ọnụ. Amabeghị mmetụta dị na cycloastragenol. Ya mere, e kwesiri iduzi nyocha iji chọpụta ihe ga-ekwe omume mmetụta cycloastragenol tinyekwara mmekorita ya na ogwu ndi ozo.
N'ịghọta uru ahụike nke cycloastragenol, ọ ga - enyere aka ịchọpụta usoro ndị na - akpata omume CAG ndị a.
Tụkwasị na nke ahụ, usoro ọgwụgwọ cycloastragenol kwesịrị ekwesị chọrọ ịmụtakwu ihe iji nyochaa usoro ọgwụgwọ a tụrụ aro maka ndị ọgbọ dị iche iche. Ndị na-eweta cycloastragenol dị iche iche depụtara usoro dị iche iche nke ekwesịrị ijikọ site na nyocha.
Yuan Yao na Maria Luz Fernandez (2017). "Uru bara uru nke Telomerase Activator (TA-65) megide Ọrịa Na-adịghị Ala Ala". EC Nri 6.5: 176-183.
Wang, J., Wu, M.-L., Cao, S.-P., Cai, H., Zhao, Z.-M., & Abụ, Y. -H. (2018). Cycloastragenol na-eme ka obi mgbawa na-eme ka ọ ghara ịdị na oke site n'ịkwalite myocardial autophagy site na igbochi akara ngosi AKT1-RPS6KB1. Biomedicine & Pharmacotherapy, 107, 1074-1081. ma ọ bụ: 10.1016 / j.biopha.2018.08.016
Anyanwụ, C., Jiang, M., Zhang, L., Yang, J., Zhang, G., Du, B.,… Yao, J. (2017). Cycloastragenol na-agbatị ọrụ na mkpochapụ mgbasa na concanavalin A na-ebute oke lymphocyte pan-activation model. Immunopharmacology na Immunotoxicology, 39 (3), 131–139. ma ọ bụ: 10.1080 / 08923973.2017.1300170.
Ip F, C, F, Ng Y, P, An H, J, Dai Y, Pang H, H, Hu Y, Q, Chin A, C, Harley C, B, Wong Y, H, Ip N, Y: Cycloastragenol Bụ Onye Na-arụsi ọrụ ike na Telomerase Activator na Neuronal Cells: Mmetụta maka Njikwa Mmetụta. Neurosignals 2014; 22: 52-63. ma ọ bụ: 10.1159 / 000365290.
Yu, Yongjie & Zhou, Limin & Yang, Yajun & Liu, Yuyu. (2018). Cycloastragenol: Nwa akwukwo akwukwo obi uto nke oria ndi gbara oria (Ntughari). Ahụmahụ na ọgwụgwọ ọgwụgwọ. 16. 10.3892 / etm.2018.6501.
IWU CYCLOASTRAGENOL (78574-94-4)
2.Gịnị bụ Cycloastragenol?
3. Usoro nke Action nke Cycloastragenol
4. Uru nke Cycloastragenol
5.Ọdịdị Standard nke Cycloastragenol
6. Cycloastragenol ọ dị mma?
7.Ebe ka anyi ga esi nweta Cycloastragenol kacha mma?